प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर डा.केसीले भने- ‘फेरि अनसन बस्न नपरोस्’ « News24 : Premium News Channel
प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर डा.केसीले भने- ‘फेरि अनसन बस्न नपरोस्’
काठमाडौं । शैक्षिक र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि अभियान चलाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राज्यमा शैक्षिक तथा मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप बढेको भन्दै फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर देशमा शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरू रोक्ने काम नभए फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष डा. केसीले आयोगलाई तहसनहस बनाउन लाग्ने माफियाविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने भन्दै ४ बुँदे बुझाएका छन् ।